Fil d'actualités du 24/03/2018
24/03/2018 - 11:30 : FAHA-42 TAONAN'NY AREMA: Tonga manotrona ny lanonam-pankalazana eny amin'ny Kianjan'ny Kanto Mahamasina ny Filohan'ny antenimeiram-pirenena Jean Max Rakotomamonjy.
24/03/2018 - 11:00 : BAOLINA KITRA: Tafiakatra hatrany amin'ny 50 000Euros ny tetibola lany amin'ny lalao ara-pirahalahiana tanterahin'ny Barea any Frantsa.
24/03/2018 - 09:30 : ANTOKO AREMA: Tanterahina anio eny amin'ny Kianjan'ny Kanto Mahamasina ny fanamarihana ny faha-42 taonan'ity antoko naorin'ny Amiraly Didier Ratsiraka ity.
Archive du 20170629
Minisiteran’ny Fizahantany Nisy nikasa hamono i Roland Ratsiraka ?
Omaly alarobia 28 jona tokony ho tamin’ny 9 ora maraina no nahitan’ny mpiambina tanàna eo anivon’ny minisiteran’ny fizahantany eny Tsimbazaza grenady, teo amin’ny toerana fametrahan’ny minisitra Roland Ratsiraka ny fiarany.
Andry Rajoelina Nasain’ny TIM ho eny Mahamasina
Antomotra ny 8 jolay, fotoana hanatanterahan’ny Tiako I Madagasikara (TIM) ny fihaonambe hanamarihana ny faha-15 taona nijoroan’ity antoko naorin’i Marc Ravalomanana ity.
Rakotomanana Hery “Tsy mpangala-bato ny CENI”
Nifamotoana tamin’ny fianakaviamben’ny antoko politika indray ny CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) teny amin’ny foiben-toerany Alarobia, omaly.
Fotoam-piasan’ny filoha Ilaina faranana milamina, hoy Rajaonarivelo
Naneho hevitra mikasika ny fahitany ny raharaham-pirenena ankehitriny, indrindra ny mety ho tohin’ny tantaram-pirenena taorian’ny fankalazana ny faha-57
Raharaha Mojize Mohamed ao Toamasina Azo tazonina amin’ny teniny ny filoham-pirenena
Ny talata 27 jona lasa teo no tokony hiakatra fitsarana tao Toamasina ny raharaha mahakasika ny fikasihan-tanana niniana nataon'ingahy Mojize Mohamed tamin’ny olona iray.
Taratasin’i Jean Voadingana i Jeanne.
Miarahaba aho ry Jean ! Hono aho rangahy ity, fa maninona kosa no voadingana foana i Jeanne rehefa mba misy miteniteny azy any ambadika any e ?
Tanànan’ Antananarivo sy Nice-Frantsa Havadika asa ny maha mpirahavavy
Homena aina vao ny maha mpirahavavy ny tanànan’Antananarivo sy Nice any Frantsa izay somary natoritory teo aloha. Hiditra amin’ny lalindalina kokoa ny fiaraha-miasan’ny tanàna roa tonta.
Fanondranana olona sy fanararaotana ara-nofo Nokianin’ny Amerikanina ny mpitondra eto
Nivoaka ny tatitry ny Amerikanina momba ny resaka fanondranana olona an-tsokosoko, izay tena vely kanonta ho an’ny fanjakana sy ny mpitondra eto Madagasikara.
Sendikan’ny Mpitsara Mampitandrina ny fanjakana
Taorian’ny fivoriambe tsy ara-potoana notanterahiny omaly teto Antanananarivo,
ONG Dago Green Hikarakara fifaninanana momba ny fanodinana fako
Ny loto, ny fiparitahan’ny fako etsy sy eroa amin’ny ankapobeny no tena manimba ny tontolo iainana eto amintsika izay zary misy fiantraikany goavana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Fihainoana ny feon’ny mpanjifa Olona enina notoloran’ny Vivo Energy loka
Olona enina no notoloran’ny Vivo Energy loka omaly nandritra ilay hetsika nokarakarainy momba ny fihainoana ny feon’ny mpanjifa mikasika ireo tobim-pivarotan-tsolika Shell misy eto amintsika.
Zokiolona sy olona sahirana ao Ankazomanga Notoloran’ny Airtel sakafo sy fanampiana
Tsy nanadino ireo olona sahirana ara-pivelomana sy marefo ny orinasam-pifandraisana Airtel rehefa fetin’ny Asramanitra tahaka izao.
Mitohy ny fahazarana
« sinema indray ! » raha nisy iny garana voatr’olombelona lany daty tsy nipoaka nanoloana ny minisiteran’ny fizahantany omaly iny.
Mpianatry ny oniversiten’Ambondrona Mandrahona ny hidina an-dalambe
Taorian’ny fahatrarana lehilahy iray 30 taona tao amin’ny faritry ny oniversiten’Ambondrona,
Haitarika momba ny fahasalamana Hampiharina hatrany an-tokantrano
Taorian’ny fanadihadiana nizahana izay faritra ahitana taha ambony amin’ny resaka fahafatesan’ny reny sy ny zaza natao tany amin’ny faritra Matsiatra ambony sy atsinanana ary
KIS Madagascar sy ny minisiteran’ny fahasalamana Hanatanteraka fizaham-pahasalamana maimaimpoana
Tsy manana fahafahana ny hitsabo tena intsony ny ankamaroan’ny olona ankehitriny, noho ny hasarotan’ny fiainana.
Mivoatra hatrany ny ECCOVA Mpianatra 400 mianadahy indray no nahavita fianarana
Fahombiazana tanteraka ho an’ny “Ecole de Coupe et Couture Volana” ny fanadinam-panjakana natrehin’ireo mpianany manerana ny Nosy,
Zandarimariam-pirenena Henjana ny fanadiovana
Zandary miisa 2 teto amin’ny faritra Analamanga no noroahina vokatry ny tsy fanarahan-dalàna tao anatin'ny 6 volana voalohan'ity taona 2017 ity.
Tsy maintsy hivoaka amin’ity herinandro ity avokoa ny voka-panadinana CEPE manerana ny Nosy. Lohalaharana amin’izany ireo faritra tsy namoaka toy ny any Fianarantsoa